MZ newsletter — MYSTERY ZILLION
April 2010 edited April 2010 in MZ News
MZ Newsletter PDF file ပါ။
ဒီနေ့ပွဲ တက်ရောက်တဲ့သူများအနေနဲ့ အခြေအနေလေးများ တချက်လောက် ရေးပေးကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က လာချင်ပေမယ့် လာလို့ မရဖြစ်နေလို့ပါ။ gtalk ကနေပဲ exiter ၊ မောင်ပြုံးတို့နဲ့ ပဲ အခြေအန စုံစမ်းခဲ့ရပါတယ်။
အော်... exiter တို့မောင်ပြုံးတို့ နောက်ပြီး prince တို့လည်း ရှိကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ဒီထက် ပိုအဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်။
အားလုံးက ညီအကိုတွေဘဲကို ဘယ်သူမှမရှိတာမှမဟုတ်တာ ရှိတဲ့သူတွေကိုလိုက်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ခင် အောင်လုပ်ခဲ့ပေါ့
မနေ့ က ပြန်ကာမှသတိရတယ် ဗျာ အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကို စပွန်စာဘယ်သူဆိုတာနဲ့ mz တည်ထောင်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားမပြောလိုက်ရဘူး
အဲဒါ ကျန်ခဲ့တယ် ၊ MZ ဒီထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေ ဗျာ။
ဒီတစ်ခေါက်ပွဲက sponsor မပါပါဘူး.. ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ လာရောက်တဲ့သူတွေကော ကူညီပေးတဲ့သူတွေကော ဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့သူတွေကော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :redface: ။
ကျွန်တော်လဲလာပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့့မှလဲမသိဘူး။ တစ်ယောက်ထဲယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့့။ အဆုံးအထိနားထောင်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်လဲ ဘယ်သူနဲ့မှမသိပါဘူး။ ညနေပိုင်းမိတ်ဆက်မှ အော် ဒါကတော့ ဘယ်သူပါလားဆိုတာသိရတာ။ ဆွေးနွေးကြတာတွေနားထောင်ရတာ ကျွန်တော့်အဖို့ကတော့ အသိပညာတွေ တော်တော်လေး တိုးလာပါတယ်။ ကိုအိမောင် web development နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားတာတွေကြိုက်တယ်။
MZ ဖိုရမ် ယခုသုံးနှစ်မြောက်မှစ၍ နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော်တိုင် တည်တံ့ နိုင်ပါစေ။
အကီနိုလည်းလာတယ် တော်တော်များများနဲ့သိခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ သိပ်မသိကျဘူး။ မသိဆို၀င်မရေးပဲ ဖတ်ကြီးပဲဖတ်နေတာကိုး။ ဘာပဲပြောပြောဒီပွဲလေးလုပ်ပေးလို့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ် လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းမျှေ၀ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ၃နှစ်မြောက်ကနေ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပါစေ..
မှတ်တမ်းပုံလေးဘာ လေးတွေ နဲ့ မတင်ကျတော့ပါလား..... ကြည့်ချင်လိုက်တာ .. ရှိတဲ့ သူများ ပြသကြပါ.
ကျနော်က တော့ တက်ဖြစ်တယ်ဗျ .. ပွဲလုပ်တဲ့ သူတွေ အားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ... Web Developing အပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော်တော် ပညာရပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ ပွဲတစ်ခုလုံးကို Web ကပဲ စိုးမိုးသွားသလားလို့ပါ ... တစ်ခြား Topic တွေ မပြောကြဘူးဗျ .. ဥပမာ .. Hardware, Network, Wireless အစရှိတဲ့ Technologies တွေ ကို ဆွေးနွေးသွားမှုတွေ လိုနေသေးသလားလို့ ... MZ Members တွေ လာတက်တာ နည်းတယ်ဗျ ...
ဘယ်သူနဲ့့မှ မသိပါဘူး.. ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်တည်းလာ၊ တစ်ယောက်တည်း နားထောင်ပြီး.... ပြန်သွားရတာပဲ...
ံHardware, Network ပိုင်းနဲ့့ပတ်သတ်တာ ဘာ့မှ မကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး
ကိုယ်တိုင်တက်ပြောရအောင် အဲ့လောက် အရည်အချင်းက မရှိသေးဘူး ........
ကျနော်လဲ .. . ဘာမှ အရည်အချင်းမရှိပါဘူး ... ဒါပေမဲ့ သိချင်တာပေါ့ဗျာ ... ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးသွားပါဘူးဗျာ ... အဲဒါတော့စိတ်ပျက်စရာပဲ